Indonezia: Fanehoan-kevitry ny Bilaogy manoloana ny fahafatesan’i Bin Laden · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Mey 2011 4:30 GMT
Niely haingana toy ny afo mandoro ny vaovao mikasika fahafatesan’ ilay “mpanjakan'ny fampihorohoroana” Osama Bin Laden. Saingy tsy noraisina tamin-karavoana lehibe ny fahafatesan'i Bin Laden tao Indonezia, firenena be Miozolomana indrindra. Nampatsiahy ny vahoaka ny solontenan'ny governemanta fa fandresena ho an'i Etazonia ny fahafatesany, fa tsy ho an'i Indonezia.
Hita fa vitsy tokoa raha ny isan'ny Miozolomana mpankasitraka ny herisetra politika saingy tena manam-bava kosa, ary tsy menatra izy ireo mampiseho fanajana ilay maherifony lavo.
Na dia izany aza, samihafa ny valinteny avy amin'ny Indoneziana. Jenny S. Bev, teraka Indoneziana, mpanoratra mipetraka ao California, nanoratra ity tao amin'ny bilaoginy:
Bilaogera Isro Machfudin nandefa tononkalo izay hitany fa tena mampihetsimpo lalina tokoa, nosoratan'i Anis Matta folo taona lasa izay taorian'ny 9/11, sady filoha ankehitriny ny Antokon'ny rariny manankarena (PKS), antoko politika islamista. Ity santionany amin'ny tononkalo:
Maro ireo Indoneziana no nahazo aina raha nandre ny fahafatesan'ny olomanga vaovao an'i jihad. Bilaogera Katedra Rajawen, nilaza hoe:
Bilaogera NRG07 niteny hoe:
Ny tian'ny bilaogera amin'izany dia tsy tsy fahafahan'ny fitondrana misoroka ny herisetra mifandraika amin'ny fivavahana ao amin'ny firenena.